Google Pixel 2: nke a bụ ekwentị ọhụrụ nke Google | Gam akporosis
Google Pixel 2, gosipụtara n'ihu ọha
Taa bụ ụbọchị dị ukwuu maka Google. Nnukwu intaneti egosiputa ihe ohuru nke Google meputara. Ana m ekwu banyere Google Pixel 2 XL, nke njedebe ya Anyị egosiworị gị nkọwa niilena Google Pixel 2. Ekwentị abụọ kụrụ ahịa siri ike n'ihi ọmarịcha mma ha, ngwaike na ịdị elu nke igwefoto dị elu ma dị ike.
O di nwute na Google kwadoro ya ihe Google Pixel 2 agaghị abata n’obodo anyị,, ọ dịkarịa ala maka oge ahụ, yabụ ọ bụrụ na ịchọrọ ijide ekwentị a dị ike ị kwesịrị ịtụgharị na Amazon ma ọ bụ onye ị maara
Njirimara teknụzụ nke Google Pixel 2 XL
Eke Google mere LG
Nlereanya Pixel 2
Usoro njikwa Android 8.0 Oreo
Ihuenyo 5 inch Full HD nchedo Corning ozodimgba iko 5
Nhazi Qualcomm Snapdragon 835
Nchekwa n'ime 64 Gb na 128 Gb ụdị nchekwa dị n’ime
Igwefoto na-aga n'ihu 12.2 mpx na teknụzụ Dual Pixel nwere mgbawa nke Google maka nhazi ihe oyiyi nwere ọgụgụ isi na igwe na-edozi arụ ọrụ - 1.8 oghere anya
Igwe n'ihu 8 mpx na Dual Pixel teknụzụ
Njikọ Nano SIM nwere nkwado eSIM - LTE-FDD: band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/20/25/26/28/29/30/32/6 - TD- LTE : 38 * / 40/412 ìgwè - Wi - Fi 2.4 GHz - Bluetooth 5.0 - GPS na aGPS GLONASS -
Atụmatụ ndị ọzọ Ahụ nke aluminom na ngwakọ ngwakọ - IP 67 mmiri na uzuzu na-echekwa - 3.1st ọgbọ USB Cdị C XNUMX - Daydream dakọtara - Mkpịsị aka mkpịsị aka na azụ - Ihe mmetụta sensọ - Barometer - Light sensor - Accelerometer - Magnetometer - Advanced X-axis maka mmezi doro anya nzaghachi. - Ifịk Edge
Batrị 2700 mAh na-enweghị ike iwepu ya na ngwa ngwa
Akụkụ 145 x 68 x 7.6mm
Ibu ibu Mmemme 143
Ahịa $ 649 (adịghị na Spain)
Teknụzụ anyị dị elu karịa njedebe niile nwere oke ngwaike iji nwee ike ịkwaga egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-enweghị nnukwu nsogbu, n'agbanyeghị etu eserese ha chọrọ. Mee ka eziokwu ahụ doo anya na Google Pixel 2 nwere otu nke kacha mma ese foto na ahịa.
Ma ọ bụ na ọ bụ ezie na Google kpebiri nzọ ke otu igwefoto, ọ bụ ezie na abụọ igwefoto usoro maka ekwentị mkpanaaka na-esiwanye fashionable, na Igwefoto 12 megapixel nke Google Pixel 2 Ọ nwere oghere f / 1.8 nke na-ekwe nkwa ijide ihe na-atọ ụtọ.
Mana, dika m kwuru na mbido isiokwu a, ndi Google Pixel 2 adịghị na mba anyị ya mere taa ọ gaghị ekwe omume inweta ya na Spain. Nsogbu mmepụta sitere na Google?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Google Pixel 2, gosipụtara n'ihu ọha
Nkwupụta ise kasịnụ Google mere na mmemme Pixel 2
Anyị enweela Google Pixel 2 XL, nkọwapụta nkọwa na ọnụahịa